Downloads 17 178
Munyori: Massimo Altieri, update kubudikidza Bob Chicilo
Press "L" kuita Activate afteburner maturo. The 2D Cockpit ndechokuti zvizere kupfuura rakapotsa Cockpit
The North American XB-70 Valkyrie aiva zvikabva supersonic bhomba weU.S. kunopera 1950. Zvinonzi rikagadzirwa North America. Makopi mbiri chete dzakavakwa, mumwe icho yakaparadzwa mutsaona.
Kurasikirwa zvikabva nemasaini rufu warandi purogiramu. ndege Iri nendege kushambadza, vatori venhau vakawanda vari zvapupu kuti tsaona ichi muchina zvinodhura kwazvo, izvozvo inorema 250 matani uye akanga arasikirwe 10 nguva yaro uremu goridhe.
On 8 June 1966, zvikabva zvaita wechipiri kunosiya Edwards AFB kuita kuyerwa sonic booms. Uyezve, muedzo uyu anobvumira General Electric, akaigadzira injini XB-70, tora mapikicha ari ndege okushambadza ane F-4B Phantom II, F-104N Starfighter, F-5A Freedom Fighter uye T -38 Talon, zvose Powered pamwe injini kubva General Magetsi. Asi F-104, wakabudiswa panogasa mhirizhonga kunotangira ari XB-70, akarova, kuparadza rworuboshwe tote stabilizer. Pashure 16 masekonzi rimwe kutiza, ivo bhomba anobuda kudzora, ipapo yakadonha.
Al White, iye XB-70 mutyairi, vabudiswa munguva asi copilot yake Carl Cross asingakwanisi buritsa uye akaurayiwa, pamwe mutyairi of F-104, Joseph Albert Walker. (Source Wikipedia)
North America XB-70 Bob NASA FSX & P3D Download
Downloads: 24 519
Downloads: 9 020